Sii Hayaha Xilka Wasiirka Warfaafinta Oo Khudbad Ka Jeediyay Shirka Caalamiga ah Ee Ka Socda Kuwait “Sawirro” – Radio Muqdisho
Sii hayaha xilka Wasiirka Warfaafinta oo saaka khudbad ka jeediyay shirka caalamiga ee doorka Hay’adaha Gar-gaarka ee ka socda dalka Kuwait iyadoo xalay uu halkaas gaaray Wafdiga Soomaalida oo uu hogaaminayay Wasiir Mustaf Dhuxulow.
Shirka caalamiga ee doorka Hay’adaha Gar-gaarka ee Soomaaliya Wasiirka Warfaafinta Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow waxaa uu ka sheegay sida Hay’adaha gargaarka u taageeran dadka soomaaliyed ee dhibaatada ku dhacday 24 sano oo dalka Dowlad la’aan ka jirtay iyo baahida loo qabo in soomaaliya dhinacyo badan laga taageero.
“Hay’adaha Gar-gaarka Caalamka waa inay Soomaaliya Mudnaan weyn siiyaan.” Arrimaha shirka looga hadlayo ayaa ugu waaweyn sidii hay’adaha gar-gaarka caalamka ay uga wada shaqeyn lahaayeen sidii gar-gaarka uu u noqon lahaa mid bedela nolosha bani’aadamka, si aysan u soo noqnoqon arrimaha abaaraha joogtada ah”ayuu yiri Sii hayaha Wasiirka Warfaafinta Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow.
Hadaba shirka oo weli socda ayaa la filayaa in Saxaafadda loo soo bandhigo hadaladii uu shirka ka jeediyay Wasiirka Warfaafinta.
Eng C/raxmaan Yariisow oo ah Lataliyaha Wasaaradda Warfaafinta ee Soomaaliya ayaa ka mid ah Wafdiga Wasiirka Warfaafinta Mustaf Dhuxulow ee ka qeybgalaya shirka doorka hay’adaha gargaarka ee ka socda dalka Kuwait
Shirka ayaa lagu wadaa in maalinta Arbacada la soo gabagabeeyo sida ay sheegayan ka qeybgalayaasha shirka.
Duqa Muqdisho Oo Kala Shiray Guddoomiyeyaasha Degmooyinka Dar Dar galinta Howlaha Caasimadda "Sawirro"